တရုတ်နိုင်ငံက ရထားလမ်းစီမံကိန်းအသစ် နှစ်ခု ခွင့်ပြု
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆ ထရီလီယံ ကျော်လွန်ခဲ့
အွန်လိုင်းတွင် နာမည်ကျော်ကြားလာခြင်းဖြင့် မွေးရပ်မြေရှိ မြင်းစီးလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေး၌ အထောက်အကူဖြစ်စေ
တရုတ်နိုင်ငံ၌ အအေးလှိုင်းအတွက် အပြာရောင် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
တရုတ်နိုင်ငံက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့် နက်ရှိုင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအား ထိန်းသိမ်းရန် ဆန္ဒရှိ
အေဒင်ပင်လယ်ကွေ့တွင် အစောင့်အရှောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် တရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုသစ်အား စေလွှတ်
တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီက ကာဇက်စတန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသည့် Alikhan Smailov ထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပေးပို့
အာကာသစခန်း စက်ရုပ်လက်တံနှင့် ကုန်တင်အာကာသယာဉ် ရွှေ့ပြောင်းစမ်းသပ်မှု အပြည့်အဝ အောင်မြင်
နှစ်ကူးညတွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် ရှားပါးသော တောင်တရုတ်ကျားပေါက်လေး “အမွှာ”
တရုတ်နိုင်ငံက ပိုမိုအားကောင်းသော ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း တည်ထောင်မည့် အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန်
ပေကျင်းအိုလံပစ်အား သံတမန်ရေးရာသပိတ်မှောက်ခြင်းဟူ၍ ပြောဆိုမှုကို ရုရှားအစိုးရ အရာရှိကန့်ကွက်
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှလွတ်ကင်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်နေရာ ရရှိမှုပမာဏ သန်း ၃၀ ကျော်ရှိရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်
တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၇ နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၃၂ ခုနှင့်အတူ “ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ” ဖော်ဆောင်ရေး စာရွက်စာတန်း ၂၀၀ ကျော် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ခရီးသည်တင်ရထား ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ လူပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရရှိ
အိန္ဒိယနိုင်ငံက စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် နောက်ထပ် COVID-19 ရောဂါလှိုင်း အသစ်ဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရ
တွန်ဂါ ပင်လယ်အောက် မီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဆူနာမီသတိပေးချက် နိုင်ငံအများအပြားတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရ
တွန်ဂါ ပင်လယ်အောက်မီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပွါးသည့် ဆူနာမီအတွက် အချိန်မရွေးကူညီပံ့ပိုးမှုများပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အသင့်ပြင်လျက်ရှိ
ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးစည်းမျဉ်းများ ချိုးဖောက်၍ မိတ်ဆုံစားပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဝန်ခံ
ရုရှား-အနောက်နိုင်ငံများ ဆွေးနွေးမှု လမ်းဆုံးပြီလား?
ရှီကျင့်ဖိန်က ပေကျင်း ၂၀၂၂ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်ထားမှုများကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ပေကျင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရှီကျင့်ဖိန်သည် လာမည့်ရှေ့လတွင် ပေကျင်းမြို့၌ ကျင်းပမည့် ပေကျင်း ၂၀၂၂ အိုလံပစ် နှင့် မသန်စွမ်းဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေများကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရှီကျင့်ဖိန်သည်...
တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဟာအားသစ်လောင်းခြင်းဆီသို့ ချီတက်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ “ဂုဏ်ပြုခြင်းမခံရသော သူရဲကောင်းများ” အား သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ချီးကျူး
၂၀၂၁ ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်တွင်းထိပ်တန်း သတင်းများ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၈.၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာ
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကပ်ရောဂါတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုများနှင့်ပြည်ပ နိုင်ငံရေးအခြေအနေရှုပ်ထွေးမှုများကဲ့သို့သောစိန်ခေါ်မှုများကြားမှပင် စီးပွားရေးကဏ္ဍ တည်ငြိမ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် တရားဝင်အချက်အလက်များအရသိရသည်။ နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးမှာ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ၈.၁...
အမေရိကန်စစ်တပ်ကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ပြန့်ပွားမှုအပေါ် တောင်ကိုရီးယားစိုးရိမ်
အိုမီခရွန် ဗိုင်းရပ်စ်ဒဏ်ခံနေရသော ထျန်းကျင်းမြို့ရှိ ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် ကိုရီးယား ပါမောက္ခလည်းပါဝင်
ဗြိတိန်အမျိုးသားတစ်ယောက်က သူ့မိသားစုအပေါ် ကိုဗစ်-၁၉၏ သက်ရောက်မှုများကို ပြန်ပြောပြ
ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှု ကင်းစင်ရေး တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များ ကြိုးပမ်းအားထုတ်
တူရကီနိုင်ငံက ပထမဆုံး အသိဉာဏ်နည်းပညာသုံးသင်္ဘောတစ်စင်းအားထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့
ပေကျင်း ၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်နှင့် ဆောင်းရာသီမသန်စွမ်းအိုလံပစ် လာဘ်ကောင်လေး “ပင်းသွန်းသွန်း”နှင့်”ရွှယ်ရုန်ရုန်”အား ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် ပေကျင်းမြို့ တွင် တွေ့ရစဉ်
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဟေးလုံကျန်းပြည်နယ် ဟာပင်းမြို့တွင် ၄၈ ကြိမ်မြောက် ဟာပင်း ရေခဲရုပ်တုမီးအိမ်ပြပွဲအား ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်က ဖွင့်လှစ်ထားစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ရန်ကုန်စတော့ခ်အိတ်ချိန်းတွင် ငွေကျပ် ၁၉၁ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ အစုရှယ်ယာ စုစုပေါင်း ၄၄,၀၀၀ ကျော် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်စတော့ခ်အိတ်ချိန်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Social, Education & Health8 hours ago
North America9 hours ago
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ ပေကျင်းမြို့တွင် တွေ့ဆုံ
ပေကျင်း ၊ စက်တင်ဘာ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် မြန်မာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် တရုတ် နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ရှိ ပြည်သူ့ ခန်းမကြီး တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
တရုတ် နိုင်ငံ တွင် ကျင်းပ ခဲ့သည့် တရုတ် နိုင်ငံ ဖက်ဆစ် ဂျပန် တော်လှန်ရေး နှင့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အောင်မြင်ခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အခမ်းအနား မှ စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ရာများ
ရန်ကုန် ၊ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ) တရုတ် နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ ထျန်းအန်းမင် ရင်ပြင် တွင် ပြုလုပ် ခဲ့သည့် တရုတ် နိုင်ငံ ဖက်ဆစ် ဂျပန် တော်လှန်ရေး နှင့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အောင်မြင်ခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အခမ်းအနား...
Asia6 years ago
ခြောက်ကြိမ်မြောက် အာဖဂန်နစ္စတန် ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ညီလာခံ အာဖဂန် နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်တွင် ကျင်းပ
ကဘူးလ်၊ စက်တင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ခြောက်ကြိမ်မြောက် အာဖဂန်နစ္စတန် ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ညီလာခံ (The Sixth Regional Economic Coorperation Conference on Afghanistan= RECCA) ကို အာဖဂန် နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်တွင် ယနေ့...
ဘန်ကောက် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု သံသယရှိသူ တစ်ဦး ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ
ဘန်ကောက်၊ စက်တင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘန်ကောက်မြို့ လေးမျက်နှာဘုရား အနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် ပါဝင်ကြောင်း သံသယရှိသော ထိုင်းနိုင်ငံသား အမျိုးသားတစ်ဦးအား ထပ်မံ ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်း ထိုင်းပြည်တွင်း မီဒီယာများတွင် ကြာသပတေးနေ့က ဖော်ပြ ထားသည်။
နောက်ဆုံး ထွက်ရှိသည့် စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှု တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅,၅၃၈.၅၁ သန်းရှိ
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီမှ ဇူလိုင်လအထိ စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှု တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၉.၂၃၁ ဘီလီယံရှိပြီး ၊ ကုန်သွယ်မှု လိုငွေမှာ မေရိကန် ဒေါ်လာ ၁,၈၄၅.၈၀ သန်း ရှိကြောင်း ဗဟိုစာရင်း...
Page 6713 of 6933« First‹ Previous670967106711671267136714671567166717Next ›Last »